Ogaden News Agency (ONA) – Cimilada Qaarada Yurub oo Aad Looga Dayrinayo Mustaqbalka.
Cimilada Qaarada Yurub oo Aad Looga Dayrinayo Mustaqbalka.
Posted by ONA Admin	/ August 6, 2017
Cilmi baadhis cusub oo dhawaan soo baxday ayaa tilmaamaysa in wixii loo gaadho dhammaadka qarnigan, ay suuragal tahay in kuleyl ba’an uu sanadkiiba Yurub ku dili doono 150 kun oo qof.
Golaha Saynisyahanada Qaarada Yurub ayaa sheegaya in musiibooyinka ka dhasha cimilada ay macquul tahay inay saameeyaan saddex meelood oo laba meel dadka ku nool Qaarada Yurub wixii looga gaaro 2100, iyadoo koonfurta Yurub ay ku dhici doonto saameynta ugu daran.
Saynisyahanada ayaa ku baaqay in la qaado tallaabo degdeg ah oo lagu xakameynayo wasakhda warshadaha ka soo baxda iyo in si wanaagsan loogu diyaargaroobo dhacdooyinka ba’an sida dab qabsada keymaha, abaaraha iyo fatahaadaha.
Inta badan koonfurta Yurub ayaa haatan waxaa ka jira cimiladii ugu kululeyd muddo ka badan toban sano, iyadoo meelaha qaarna ay cimiladu gaartay 45 digrii ee halbeegga celsius loo yaqaano ee lagu cabiro heer-kulka cimilada.